Ọ bụghị site na Ken Follett
Ọ dị ka Ken Follett tupu nnukwu akụkọ ifo alaghachila. Na nke ahụ bụ ntigharị nke na -etinye anyị n'ime afọ 90. Oge zuru oke maka anyị bụ ndị nọrịrị afọ na -enweghị atụ. Ọ bụ ya mere ndị anyị gụrụla Ken Follet tupu ...
Miss Merkel. Okwu nke onye isi ala ezumike nka
Ị maghị na ọnụ ụzọ a na -agbanwe agbanwe maka ndị na -ahapụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na -arụ ọrụ. Na Spain ọ na -abụkarị na ndị bụbu onye isi ala, ndị bụbu ndị ozi na ndị isi ndị ọzọ lara ezumike nka na -ejedebe n'ọfịs ndị a na -atụghị anya ha na nnukwu ụlọ ọrụ. Mana Germany n'ezie dị iche. Ebe ahụ …